Chii chiri kuisa mari mukusagadzikana? | Ehupfumi Zvemari
Chii chiri kuisa mari mukusagadzikana?
Kutanga kwegore kwakaunza kukwira nekudonha mumutengo wemasheya akatya chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Muchiitiko ichi, inguva yekufungisisa kuti ingangove nguva yakanaka yekudyara mari mukusagadzikana. Asi kuti zano iri rikudziridzwe nemazvo zvichave zvakakosha kuti unzwisise zvinoreva izwi iri risipo mumutauro wechikamu chikuru chevashandisi. Nekuti ichokwadi chaizvo kuti unogona wana mari yakawanda kuburikidza neiyi yakasarudzika nzira yekudyara, asi zvakare kukusiira iwe ma euro mazhinji munzira.
Volatility inogadzirwa kana zvikaitika mhirizhonga mumisika yemari. Kusvika pakuti iwe unogona hapana chimiro chaichoPane kudaro, migove yemitengo inotungamirwa nemafungire evamiriri vemari. Iko nekukurumidza pavanogona kukwira 5%, sezuva rinotevera misika inosara iine kumwechete kusimba kana kunyangwe neyakajairika zvakanyanya maitiro. Icho chiratidzo chakanyatsojeka kuti kusagadzikana kwakagara mumisika yemari. Iyo inogona kukanganisa ese ari maviri equities uye yakamisirwa mari kana kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru.
Imwe yemabhenefiti makuru ekudyara mari mukusagadzikana ndeyekuti iwe unogona kutora mukana weiyo zviitiko zvisingafadzi yezvikwereti. Nenzira iyi, zvinokwira kumusoro hazvidi kuita mashandiro anobatsira pamusika wemasheya. Kwemakore mazhinji iyi nyowani manejimendi modhi yakaitwa uye iri kuva nezviuru nezviuru zvevateveri pakati pevashoma nepakati varimi. Kunyangwe zvakakosha kuti uzive mashandiro mune aya chaiwo mamiriro. Nekuti kuziva nzira yekupinda uye kubuda mumisika yemari kwakakosha. Chero izvo zvaive izvi: musika wemasheya, mari, mbishi zvigadzirwa kana simbi dzinokosha.
1 Kuzvibata: VIX Index
2 Investment mune mutual mari
3 Nekusagadzikana zvachose
4 Makomisheni emari idzi
5 Ngozi dzekushanda uku
6 Nhengo dzekufunga
Kuzvibata: VIX Index
Kubva pane akajairika mamiriro mukusagadzikana, imwe yesarudzo dzakanakisa dzauinadzo parizvino ndeyekuisa mari yako mukuchengetedza index yeVIX. Hazvishamisi kuti inozivikanwa seye kutya index yehunhu hwayo hwakakosha. Nekuti zviripo, pakati peupfumi hwehupfumi, muna2008, nepo bhenji yekuenzanisira indekisi muUnited States yakadonha neinosvika makumi mashanu muzana, iyo VIX yakakoshesa pamusoro pe50%. Izvi zvinopa hukuru hweizvo zvinomiririra kune vashoma nevapakati varimi.
Nekuti nepo misika yemasheya ichidonha, iyo inonzi yekutya index inokoshesa zvakanyanya. Aya ndiwo marongero anoita chero zano rekudyara maringe nezvino kusagadzikana mumisika yemari. Uye izvo saka zvinosanganisira kufamba kwekusasimba kusimba. Iko varimari vari muchinzvimbo chekuwana kudzoka kwakakwirira kubva kunzvimbo dzakavhurika mumisika yequity. Pamusoro pezvimwe zvekugadzira uye kunyange zvakakosha kufunga.
Investment mune mutual mari
Zvichida nzira yakapusa yekuvhura zvinzvimbo mukushomeka kwemisika yemari iri kuburikidza nezvakakosha izvi zvigadzirwa zvemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti vanounganidza maitiro aya pamwe nezvimwe zvinhu zvemari. Kusvika padanho rekugadzira nzira dzakasiyana-siyana. Mune mamwe mazwi, yako portfolio yekudyara inoumbwa nemari, kusagadzikana uye mari yakatarwa. Saka kuti nenzira iyi, unogona kuchengetedza yako mari kuburikidza nekusiyana kwavo. Ichi chiitiko chekuda kuziva chakapihwa nemari yekudyara zvinoenderana nekusagadzikana.
Hazvishamise kuti mari idzi dzinokutendera kuti utore mukana wezviitiko uko iwe unowanzo siya zvigaro mumusika wemasheya. Nekuchinja kwakasimba mumitengo uye uko musiyano uripakati peiyo yakanyanya uye shoma mutengo wezvikamu wakakwirira kupfuura zvakajairwa. Iwe unongova nesarudzo mbiri chete, kune rumwe rutivi, sarudza yekutengesa kwezuva nezuva mashandiro. Uye kune rimwe divi, sarudza homwe yekudyara iyo inopa aya akakosha maitiro. Kunyangwe njodzi iripowo yakakwira zvakanyanya kupfuura iyo yemamwe mamodheru aunogona kuwana mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari. Kwete pasina, iwe uchafanirwa kudaro funga nezvazvo kanopfuura kaviri usati wavanyorera.
Dzimwe mari dzekudyidzana, kune rimwe divi, dzinovakisa yavo nzira yekudyara kwete pane portfolio kusiyanisa. Kana zvisiri zvakachena uye zvakaoma kusagadzikana, pasina kuwedzerwa kweimwe kirasi yemari midziyo uye kunyangwe zvidiki zvavanogona kunge vari. Kwete pasina, zvazviri ndezve kunyatso kushandisa iwo matipi eaya mafambiro anoita chisimba uye dzimwe nguva zvakare zvisina musoro. Kusangana neichi chakakosha kudiwa, mamaneja akagadzira mari inozadzisa aya mabasa nemazvo. Parizvino hapana akawanda asi chero zvodii kudiwa kweavo vadiki nevepakati varimari kunovharwa.
Hunhu hwavo hwakanyanyisa uye hunogona kukutungamira kuti uchengete kusahadzika kwakateedzana panguva yekuzvigadza. Nekuti vane kudonha kukuru apo musika wemasheya unokwira zvine simba sezvazvakaitika mumakore achangopfuura. Asi iyo yekumashure mhedzisiro iri zvakare inokatyamadza nekuti kana misika yequity ikapinda chikamu chekugadzirisa kana zvirinani pasi pekuderera, kuputika kwepamusoro kwemari idzi kunoshamisa kwazvo. Kusvika pakuti iwe unogona kuwana mari yakawanda navo.
Makomisheni emari idzi
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora kubva zvino zvichienda ndeye imari iyo mari yekudyara ichakugadzirira. Zvakanaka, kazhinji ivo vanowedzera zvakanyanya kupfuura vamwe vese nekuti ma komisheni avo ave pedyo 2% mazinga. Chero zvazviri, misiyano yavo zvine chekuita neyakajairika equity uye yakamisirwa mari yemari yakawanda. Ndokunge, manejimendi uye kugadzirisa kwaro kuchada kuwedzerwa kwemari kuita kubva ikozvino.
Uye zvakare, hazvikurudzirwe kuti uve navo mune akareba mazwi: epakati uye akareba. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vanoshanda zvakanyanya kwenguva pfupi kwaunogona kutora mukana weaya akakosha mafambiro. Kana izvo zvakafanana, zvakagadzirirwa kuita kwakasarudzika mashandiro uko misika yechinyakare yakanyudzwa nekusaziva kukuru. Kushumira mune idzi kesi senzvimbo yekutizira kune ako ese investments. Beyond the profile iyo yaunopa mune yega yega yenguva: ane hukasha, anochengetedza kana epakati.
Ngozi dzekushanda uku
Izvo zvakare zvakakosha kuti iwe ukoshese njodzi dzaunogona kutora nerudzi urwu rwekushanda. Nekuti mukuita, iwe unofanirwa kufungidzira kubva pakutanga kuti inogadzira njodzi dzakawanda kupfuura zvimwe zvigadzirwa inoitirwa kudyara. Neichi chikonzero chaicho haufanire kuisa mari yako yese inowanikwa. Kwete zvakanyanya kushoma, kana zvisiri izvo zvinoshanda nechidiki chikamu chayo. Saka kuti nenzira iyi, iwe unochengetedzwa kubva pamisangano isingadiwe nevashambadzi vadiki nepakati. Kwete pasina, hausi kutarisana nechero mari yekudyara asi zvinoenderana nekusagadzikana. Uye izvi zvinoreva kuti ine yakanyatsotsanangurwa hunhu kubva pakubata kwayo.
Ehezve iwe unogona zvakare kusarudza iyo ETFs zvichibva pane ino yehupfumi yemari. Asi nechipo chidiki kwazvo izvozvi. Kusvika padanho rekuti iwe uchave uine mamwe matambudziko ekugutsa iyi yakasarudzika kudiwa iwe iwe unayo. Iwe haugone kukanganwa kuti izvi zvigadzirwa zvemari zvakagadzirwa musanganiswa pakati peyakajairika mari yekudyara uye kutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya. Nezvakanaka nezvakaipa zvese zviri zviviri mamodheru akagadzirirwa kudyara. Kunyangwe, sekukosha kwayo kukuru, ichipa makomisheni ari kukwikwidza zvakanyanya, zvese zvine chekuita nemari ivo pachavo nekushanda mumisika yemari.
Kana iwe uchizosarudza kusagadzikana sechinhu chekudyara mumwedzi iri kuuya, zvine hungwaru kuti iwe utarise zvimwe zvekufunga. Pakati pazvo zvinotevera kumira:
Icho chaicho chigadzirwa zano sezvo zvinoenderana nemamiriro akakosha emari emari.
Ivo havashande seyambiro yekudyara zvachose Sezvo chinhu chega chinogona kuburitswa nezano iri ndechekuti iwe urasikirwe nemari yakawanda pane yekutanga kukwidzwa mune zvaunofungidzira.
Ehe, haisi mari inofungidzirwa senge yechinyakare uye nekudaro iyo parameter yekudyara zvichave zvakasiyana zvakanyanya kubva kune ese maonero maonero.
Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekunge uine imwe tsika yemari yakafara kupfuura mamwe mafomati mukudyara. Kana zvisiri, zvirinani kurega kurega kuyedza mumazuva mashoma anotevera.
Muzviitiko zvese, haugone kukanganwa kuti ndeye yemhando yekudyara iyo inoshandisa nzira dzakasiyana kugadzirisa purofiti. Pane ino chiitiko, pasi pezviitiko zvakaomesesa zvemusika wekutengesa.
Ichokwadi icho hauna dzimwe nzira dzakawanda kupi kwekuita ichi chikumbiro, icho chaunofanirwa kuongorora mune zvakadzama ruzivo rwezvino rwemari.
Imwe yesarudzo dzekupedzisira kutora mukana wekusagadzikana ndeyekuhaya Kiredhiti kutengesa. Ndokunge, kana mutengo wezvikamu ukawira mumisika. Kunyangwe ichi chiri chimwe chezvigadzirwa zvine njodzi huru kune vese vanoita mari. Hazvishamise kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda asi zvakare woirasa mumazuva mashoma. Iwo chete profiles ane njodzi ndiwo anowanzoitika kwavari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chiri kuisa mari mukusagadzikana?